कतारबाट एक बर्षमा घर फर्किन पाइदैन र ?
Sat, Apr 21, 2018 | 19:23:34 NST
14:54 PM (5 months ago)
सागर दराई / कतार
प्रश्नः कतारबाट एक बर्षमा घर फर्किन पाइदैन र ?
उत्तरः सागर जी, कतारमा रोजगारीका लागि जाने कामदारले २ वर्षको सम्झौता गरेर जानुपर्छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व महासचिव कमल तामाङका अनुसार काम चित्त बुझेन अथवा केही समस्या परेर फर्कन चाहेको भए नेपाल फर्कन मिल्छ। तर टिकट चाहिँ आफैंले काट्नु पर्छ। तपाईंले सम्झौता गरेको अवधि पूरा गरेर फर्कंदा भने कम्पनीले नै फर्कने टिकट काटिदिन्छ।
उद्दारलाई प्राथमिकता, गलत काम गर्नेलाई कानुनी उपचार : नेपाली दूतावास युएई युएईमा रहेको नेपाली दूतावासले रोजगारीका लागि युएई आएर समस्यमा पर्ने नेपालीलाई सहयोग र अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई उद्धार गर्ने काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएको छ ।
देखिएको जोडीको छेकिएको कथा ३ किरण र लक्ष्मीको व्यथा एउटै थियो । साथमा दुवैका हुर्किंदै गरेका छोरा पनि । आर्यनलाई लक्ष्मीले आमाको माया दिने बाचा गर्नुभयो अनि लोकेन्द्रलाई किरणले बुवाको ।
वेश्यावृत्ति र पार्कमा शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्ने सहित १८५ जना नेपाली युएईको जेलमा युएईमा सबैभन्दा धेरै नेपाली बस्ने शहर दुवईमा रहेको सेन्ट्रल जेल अल अविरमा सबै भन्दा धेरै ६६ जना नेपाली छन् । तीमध्ये पाँच जना महिला छन् । आबुधावीमा रहेको अल आत्वा जेलमा एक महिला सहित ६४ जना छन् । त्यस्तै अलऐनको मनाशिर जेलमा एक महिला सहित १५ जना नेपाली छन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने २ प्रतिशत मात्रै दक्ष, अदक्ष ७४ प्रतिशत
काठमाडौं, वैशाख ८ – वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीमध्ये धेरै अदक्ष कामदारकै रुपमा जाने गरेको पाइएपछि सरकारले अब तालिम दिएर मात्रै पठाउने तयारी गरेको छ ।
​१७ वर्षको उमेरमै कतार पुग्दा एसएलसी दिएको थिएँ । त्यो भन्दा माथि पनि पढ्न मन थियो । तर घरको आर्थिक अवस्थाले गर्दा मैले त्यो भन्दा धेरै पढ्न सकिन । त्यतिबेला गाउँबाट सबैजना विदेश गइरहेका थिए । मलाई विदेशको बारेमा थाहा थिएन । अरुले कमाइ हुन्छ भन्ने सुनाए । पढ्न पैसा थिएन । घरमा यतिकै बस्नु भन्दा त विदेश गएर कमाउँछु भन्ने लाग्यो । विदेश जान्छु भन्ने शब्द मेरो मुखबाट उम्कन नपाउँदै दलालले मैले सुनेको भन्दा पनि राम्रा कुरा सुनाए । एसीको पसलमा हो काम । उनले मलाई किन्न आउने गाह्रकलाई एसी देखाउने र घरमा गएर एसी फिट ग... पुरा पढ्नुहोस